Faah faahin:- Dad shacab ah oo lagu xasuuqay deegaanka Qeydaro ee bariga Gaalkacyo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dad shacab ah oo lagu xasuuqay deegaanka Qeydaro ee bariga Gaalkacyo
Waxaa habeenkii xalay bariga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay illaa 5 qof oo kasoo jeeda hal qoys, iyadoona sidoo kale la dhaawacay qof kale oo isla qoyskaasi ka mid ah.
Koox hubeysan oo kaasoo jeeda deegaanada Galmudug ayaa la sheegayaa inay rasaaas ooda kaga qaadeen qoyskaasi la sheegay inay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah isla-markaana ku sugnaa tuulo ku dhaw deegaanka Qeydaro ee bariga magaalada Gaalkacyo.
Rasaastaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhimatay Hooyo Caasho C/laahi Cali Maxamuud iyo 4 caruur oo ay dhashay, iyadoona kooxihii weerarka geystay ay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen.
Caruurta geeriyootay ayaa la sheegayaa inay kala ahaayeen labo wiil iyo labo gabdhood oo da’doodu aad u yarayd, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay gabar kale oo isla qoyskaasi ka tirsan.
Illaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka loo geystay dadkaasi, iyadoona inta badan la sheego dilalka ka dhaca deegaanada gobolka Mudug uu salka ku haayo aanooyin qabiil.
Deegaanka Qeydaro ee bariga magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegayaa inay haatan ka taagan tahay xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay dilka qoyskaasi, iyadoona odayaasha iyo waxgaradka kasoo kala jeeda labada dhinac ay weli ku dadaalayaan sidii xiisadaasi loo dejin lahaa.
Dhinaca kale, xiriiro kala duwan oo aynu la sameeynay mas’uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa ka gaabsaday inay faah faahin dheeraad ah naga siiyaan sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka loo geystay qoyskaasi xoolo dhaqatada ahaa.
Inta badan deegaanada ku yaalla gobolka Mudug waxaa muddooyinkii ugu dambeysay ka dhacaayay dilalka ay geystaan maleeshiyaadka hubeysan, xilli maamulada Puntland iyo Galmudug ay dhawaan heshiis ku gaareen nabadeynta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.